Interview Archives - Online Media
तपाईं अहिले Interview सम्बन्धी खबरहरु हेर्दै हुहुन्छ |
Arts, Economic, Entertainment, International, Interview, News, Technology Comments are Off
लेखक: Online Media प्रकाशीत मिति: April 11, 2018 (11 Apr, 2018)
अमेरिकी संसदमा फेसबुकका मालिक जुकरबर्गको पाँच घण्टा बयान-फ़ेसबुक गोपनीयताको ज़िम्मेवार को रहन्छ ?
काठमाडौं : प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण दुरुपयोगको आरोप खेपिरहेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका मालिक मार्क जुकरबर्गले मंगलबार पहिलोपटक अमेरिकी संसदको सामना गरेका छन्। जुकरबर्गले प्रयोगकर्ताको गोपनीयता, डाटा माइनिङ, नियमन तथा क्याम्ब्रिज एनालिटिका लगायतका विषयमा अमेरिकी सिनेट र न्यायीक समितिका सदस्यहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए। उक्त सुनुवाई पाँच घण्टा चलेको थियो। मार्क जुकरबर्ग। फोटोः सिन्ह्वा/रासस लाखौं फेसबुक प्रयोगकर्ताको विवरण एउटा राजनीतिक परामर्शदाता कम्पनी एनालिटिकाले प्रयोग गरिरहेको भेटिएपछि फेसबुक विवादमा तानिएको छ। राजनीतिक
Interview, Job, Life Style, News, Research Comments are Off
लेखक: Online Media प्रकाशीत मिति: March 6, 2018 (6Mar, 2018)
पत्रकारले पत्रकारको पोल खोल्यो ! पेशा छोडेर पत्रकार किन पलायन हुदैछ ?
हेटौडा/ राज्य बिकासको लागी चरम दौडमा रहेको कुरा कसैले नकार्न सकिन्न । मुलुकले संविधान पाए लगतै संघियता र राज्य पुन: संरचनाको कार्यन्वयन सम्म भई सकेको अवस्था हो । यी सबै उपलब्धीहरुको श्रेय कलम चलाएर अवाज बुलन्द गर्नेहरुको पनि हो । पत्रकार भन्ने वित्तिकै आम जनमानसमा सचेत नागरीकको दर्जामा हेरिन्छ । तथापि श्रमको मूल्याँकन नहुने र तोकिएको पारिश्रमिक पनि नपाउदा हेटौडाका पत्रकारहरु मिडिया हाउस प्रति आक्रोश पोखेका छन । श्रमजीवी पत्रकारहरुले
Interview, Job, News Comments are Off
सन् २००८ मा नेपाल सरकार र दक्षिण कोरिया सरकार बिच सम्झौता भएर ईपिएस प्रणाली लागु गरिएको हो । थोरै लगानीमा राम्रो कमाई हुने हुदा नेपाली युवा माझ कोरिया निकै आकर्षक गन्तब्यको रुपमा परिचित छ । उसो त पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कोरियामा औधोगिक दुर्घटना परेर र आत्महत्या गरेर ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बददो छ । कोरिया जान चाहने युवालाई लिईने कोरियन भाषा परिक्षा प्राय जसो हरेक बर्ष खुल्ने गर्छ । यसै
Arts, Interview, News, Politics Comments are Off
लेखक: Online Media प्रकाशीत मिति: February 12, 2018 (12 Feb, 2018)
हेटौँडाबाट राजधानी सार्ने अवस्था आउँदैन-मुख्य मन्त्री डोरमणि पौडेल
काठमाडौं, मुख्य मन्त्री डोरमणि पौडेल, एमाले संसदीय दलका नेता, प्रदेश ३ ०३६ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय डोरमणि पौडेल तत्कालीन हेटौँडा नगरपालिकाको १० वर्ष मेयर भए । मेयर हुँदा उनले हेटौँडालाई हरियाली सहरको रूपमा विकास गर्ने, सहिद स्मारक बनाउने, सहरमा जथाभावी जग्गा प्लटिङ रोक्नेजस्ता राम्रा काम गरेर चर्चा बटुले । मकवानपुर क्षेत्र नम्बर १ को ‘ख’बाट प्रदेश सांसदमा विजयी पौडेलले ज्येष्ठ सदस्यको रूपमा ३ नम्बर प्रदेशको पहिलो अधिवेशन पनि चलाए । सोही
Interview, News Comments are Off
लेखक: Online Media प्रकाशीत मिति: January 22, 2018 (22 Jan, 2018)
ओली प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवैका हकदार: सौरभ
‘प्रचण्डले ओलीलाई भविश्यमा धोका दिन सक्छन्’ चिरञ्जीवी पौडेल काठमाडौं । देशको पछिल्लो राजनीतिक विकास क्रमलाई लेखक-बुद्धिजीवीहरु आ-आफ्नो ढंगमा विचार-विवेचना गरिरहेका छन् । कांग्रेस पराजयको कारणदेखि वाम गठबन्धनको भविष्यसम्ममा अनेक कोणबाट सञ्चार माध्यममा पोखिएका छन् । यो होहल्लाबीच मौन बसिरहेका छन्, चर्चित लेखक सौरभ । त्यसो त, उनी फ्याट्ट लेखिहाल्ने, बोलिहाल्ने मान्छे पनि होइनन् । हामीले अलि कर गरेपछि उनी समसामयिक राजनीतिका विषयमा अन्तरवार्ता दिन तयार भए । त्यस क्रममा उनले
Interview, News, Religious Comments are Off
लेखक: Online Media प्रकाशीत मिति: January 12, 2018 (12 Jan, 2018)
कोरियामा ल्होछार कार्यक्रम भव्यताको साथ हुने
दक्षिण कोरिया/ कोरियामा पनि सोनाम ल्होछार भव्यताका साथ मनाउने भएको छ । नेपाल तामाङ संघ दक्षिण कोरियाले २८५४ औंको रुपमा ल्होछारलाई फेब्रुअरी १५ तारेखमा कार्यक्रम तय गरेको हो । भेलाले संघको अध्यक्ष उईनासिंह वाईबाको संयोजक र संजिव कुमार गोलेको उप-संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । साथै विविध उप समिति पनि निर्माण गरेको जनाएको छ । अब यो समुदायबाट नेतृत्वको बिकास गराउनु पर्ने महासचिव मेघ प्रसाद वाईवाले जोड दिएको
Arts, Economic, Entertainment, Headline, Health, Interview, Job, News, Politics, Pravasi, Religious, Sports, Technology, Thoughts No Comments »
लेखक: Online Media प्रकाशीत मिति: December 12, 2017 (12 Dec, 2017)
लमजुङमा एमाले समानुपातिकामा पहिलो आश गुरुङ, लमजुङ २०७४ – मंसिर १० गते सम्पन्न पहिलो चरणको मतदान अन्तर्गत प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक तर्फ लमजुङमा एमाले पहिलो दल बनेको छ । कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो बनेको छ । मंगलबार साँझ सम्पन्न मत परिणाम अनुसार एमालेले प्रतिनिधि सभातर्फ ३३ हजार ३ सय ९ मत ल्याएको छ । कांग्रेसले २७ हजार २ सय २९ मत पाएको छ । माओवादी
आफ्नो पराजयबाट बिचलित नहुनका लागि कार्यकर्ता र समर्थकहरुलाई आग्रह-निवर्तमान सांसद राजाराम स्याङ्तान
आफ्नो पराजयबाट बिचलित नहुनका लागि कार्यकर्ता र समर्थकहरुलाई आग्रह मकवानपुर क्षेत्र नं २ को प्रदेशसभा ख का उम्मेदवार एवं निवर्तमान सांसद राजाराम स्याङ्तानले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफूमाथि हात हतियारसहित आक्रमण प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् । विज्ञप्तिमा उनले अनर्गल प्रचारहरु गरी चरित्र हत्या गरेको आरोप लगाए । मतका लागि कम्बल, चामल र रकम बितरण जस्ता समाचारहरु लेखेर हुँदै नभएको बिषयलाई अतिरन्जित पारिएको उनको भनाई थियो । ‘त्यस्ता कुराहरुमा एकप्रतिशत पनि
कस्तो समृद्धि ? कस्तो समाजवाद ? लेनिनवाद र माओवादको सम्मिलनबाट कस्तो कम्युनिस्ट पार्टी बन्ला ? – केशव दाहाल माहोल चुनावमय छ, चुनावसँगै रंगीविरंगी घोषणापत्रहरू आइरहेका छन् । दलका घोषणापत्रमा सबैभन्दा धेरै बोलिएको शब्द हो, ‘समृद्धि’ र ‘समाजवाद’ । ‘समाजवाद’सँग नेपाली कम्युनिस्टहरूको द्विविधा र लगाव तीव्र छ । उनीहरू यो शब्दमाथि आफ्नो नैसर्गिक स्वामित्व स्थापित गर्न चाहन्छन् । हुन पनि कम्युनिस्टहरूको चर्चा नगरी समाजवादको कुरा गर्नु आधाउधी काम मात्र हो ।